Sida loo isticmaalo Spotify goobidda iyo sida ay u baadhaan playlist
Mid ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee Spotify waa doorasho raadinta heli karo. Iyadoo ay xulashada raadinta ee la heli karo dadka isticmaala ku barakaysan yihiin fursadaha fudud ee turxaan baaritaan iyo muusiko dhegayso wax ilbiriqsi gudahood. Fursadaha Search ku salaysan ku sifayn, sanadka iyo kuwo kale oo badan ayaa laga heli karaa si ay u fududaato oo dheeraad ah oo la safeeyey.
Qaybta 1aad: Sida loo raadin music on Spotify
Qeybta 2: Talooyinka Spotify playlist search
Si aad u hesho music on Spotify, baahida dhabta ah waa la baadhi ee file music waxaa ku. Iyadoo natiijada Search ka kala qaybiyey track, album, ama kooxo kusalaysan artist, aad si fudud u samayn kartaa raadinta ee songs ku salaysan likings aad. Tallaabooyinka soo socda micneeyo nidaamka oo dhan baadhi ee music on Spotify.
Bilow qortid wax sanduuqa raadinta
Waxaad heli doontaa natiijo Hit Top, waxaana ku xiga kulan ee ugu sareeya term.From raadinta in hoos-hoos liiska, dooro ikhtiyaarka ah 'tusiya dhammaan natiijooyinka' si aad u aragto liistada buuxda ee natiijooyinka raadinta la socdaan natiijada loo kala qaybiyey Playlists, Artists, iyo Albums.In kiis aad u guurto mouse ka badan magaca artist ee column Artist ah, magaca walaacsan jirsado galay link a clickable
Riixaya link tan aad qaadanayso in artist ee profile page. Waxaa aad u arki karto dhammaan macluumaadka ku yaal bogga tusmada. Laga soo bilaabo view this, waxaad riixi kartaa magaca wax album iyo aadi kartaa bogga ay shaqsi. Sidaas darteed, waxaad bilaabi kartaa ciyaaro album dhan ka Spotify bogga ugu weyn ee ay double-gujinaya song ugu horeysay, ka dibna Spotify ee u ciyaara tareenka si.
Iyadoo playlist raadinta Spotify, waxaad si sahal ah nadiifin kartaa baaritaan hab aad u fiican. Iyadoo ay xulashada Search la heli karo, Spotify si sahal ah nadiifin karo files music ku salaysan shuruudaha su'aal ah oo si sahal ah soo bandhigi karaan faylasha doonistaada. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah Talooyin iyo tabaha loogu talagalay sida loo isticmaalo Spotify playlist Search.
Qaado kiiska, halkaas oo aad ku soo gashay ereyga 'Madonna' laakiin aadan rabin in aad raadiso Madonna, madaama aanan raadinaya farshaxanka Madonna waa kuwa icon dunida caanka ah ee music adduunka, laakiin halkii ay raadinayaan songs halkaas oo horyaal waxaa ka mid ah erayga 'Madonna'. Markaas, haddii ay dhacdo in, waxaad ka raadin kartaa 'title: Madonna', kaas oo ku siin doonaa su'aal raadinta la doonayo.
Sidoo kale, waxaad ka raadin kartaa 'album: Madonna' iyo 'artist: Madonna' si aad u hesho kaliya tallaabadaas albums iyo farshaxan, siday u kala horreeyaan.
Si aad u sii kala miiri aad baaritaan ku salaysan dhinacyada ka badan, waxaad ka heli kartaa faylasha kale oo. Waxaad ka raadin kartaa muddo sannad ah, kala duwan oo ka mid ah sano ama ku sifayn ah: 'sanadkii, 1969', 'sanad: 1998-2003' ama 'ku sifayn, naf'.
Xitaa Caqli ahaan waxaad isticmaali kartaa isku si aad u baadhid technofest ka 90s hore ama heeso dhintay mahadisaan ka 60meeyadii soo daahay: 'ku sifayn: technofest sano: 1990-1995' ama 'artist: "mahadisaan dhintay' sanad: 1965-1970".
Sifayn: music Muujiya ee keyword u dhigma ku sifayn ah. Eeg liiska dhammaan qaybaha, tusaale ahaan ku sifayn: blues, sifayn, "ayaa dhagaxayga weyn iyo roll".
Calaamadinta: Muujiya music sii daayay keyword u dhigma calaamad ah.
isrc: Bandhigay kuwan raadkaygay tallaabadaas tirada ID sida ay Standard Rikoodh International Xeerka.
UPC: albums Muujiya tallaabadaas tirada ID sida ay Product Universal Xeerka .
tag: cusub - Liisaska ka albums ugu dhawaan ku daray. 'Tag' ma ku soo laaban doonaa natiijooyinka wixii keywords kale.
Xataa waxaad ka raadin kartaa sida soo socota:
Kyuss IYO Green - liiska natiijada la keywords 'Kyuss' iyo 'Green'
Zeppelin AMA Floyd - liiska natiijada la keywords 'Zeppelin' ama 'Floyd'
Metallica MA Cadho - liiska oo dhan kuwan raadkaygay Metallica mooyee erayga "cadho"
Fursada raadinta heli karaa Spotify waa mid aad u awood badan sidan oo kale in ay u ogolaataa dadka si ay u shaandhayso wax, oo ku salaysan weydiimo ay a. Natiijada kasta oo la sifeeyay karaa hab kasta oo iyadoo la kaashanayo doorasho Search ee Spotify ah, natiijooyinku waxay noqon kartaa wax badan oo wax ku ool ah oo si deg deg ah la soo saaray oo ku salaysan rabitaan iyo shuruudaha.
Sida la raadinta Google ah, waxaad isticmaali kartaa modifiers raadinta si ay u isticmaalaan Spotify wax ku ool ah oo kaa caawinaya in aad ka heli dhab ahaan waxa aad raadinayso in Spotify. Just halkan soo galana raadinta iyo si fudud ku qor su'aal kasta oo goobidda iyo in soo celin doonaa dhammaan natiijada la xiriira su'aal raadinta. Si sahal ah waxaad ka arki kartaa fanaaniinta, albums, playlists, profiles, iyo ku dhowaad marna dhamaaneynin liiska heeso iyo raad.
Si aad u samayso aad fahmi fursadaha raadinta, waa kuwan qaar ka mid ah snapshots ee line waxgarashada dhameystiran. Eeg iyaga at.
Spotify Search waa mid ka mid ah ikhtiyaarka ugu horumarsan raadinta joogo in wax codsiyada Music Streaming. Mid ka mid ah adeegga geeyo ugu awooda badan u ogolaanaya fursadaha raadinta siyaabaha kasta oo suurta gal ku xiran tahay dalabaadka users 'iyo gabaygayga lagu sifeeyay karin ku salaysan ku sifayn ah, sanad, fanaaniinta iyo qaar badan. Sidaas darteed, iyadoo la kaashanayo doorasho raadinta, users adduunka oo dhan ka abaalmarinayn mid ka mid ah adeegyada ugu fiican oo ah qaab Spotify.
> Resource > Spotify > Sida loo Isticmaalo Spotify Search Function iyo Sida loo Raadi Playlists